Fsociety: Otu ezigbo mkpọ hacking ngwaọrụ | Site na Linux
Ọ bụghị ihe nzuzo ọ bụla na onye ọ bụla kemgbe ahụ Maazị Robot: usoro Geek ị chọghị ịhapụ Mmasị na hacking na-eto ngwa ngwa, anyị ahụla oke agụụ maka ojiji nke distro dị ka Kali Linux na ọtụtụ ndị na-abịakwute anyị na-achọ hacking ngwaọrụ.
Mgbanwe a niile gbara gburugburu nchekwa kọmputa, mpụ cyber, imebi iwu gbasara ndị ọzọ na ndị ọzọ, ewetala ihe okike nke ngwa ngwa ọhụrụ yana ọdịnaya ọhụụ, n'oge a, ọ tụrụ anyị n'anya nke ukwuu na enwere ụlọ akpọrọ fsociety Hacking Ngwaọrụ Pack ìgwè ndị ahụ ngwa niile ejiri na Mr Robot na ị na-akwado ha na usoro ọzọ hacking ngwa.
1 Kedu ihe bụ Ngwaọrụ Hacking Ngwaọrụ?
2 Olee otú iji wụnye Fsociety Hacking Tools Pack?
Kedu ihe bụ Ngwaọrụ Hacking Ngwaọrụ?
Ọ bụ mkpọ nke ngwaọrụ maka ịba ụba na ịpị ọtụtụ, nke otu dị iche iche nke iwu na ngwa metụtara nchekwa kọmputa na hacking, na-enwe otu ụdị nke ọ na-eme ka ọ dịrị na enwere ngwa ndị ahụ eji usoro telivishọn ama ama. Robot.
Usoro a dị elu na-enye anyị ohere ịme ule nyocha ma kwadoo ya na ngwa ndị na-achọ ịnakọta ozi, chọpụta okwuntughe, mee nyocha ikuku, jiri adịghị ike, wakpo ngwa weebụ na ọha na nzuzo, rụọ ọrụ, na mgbakwunye itinye Sniffing na Gha.
E nwere ihe karịrị ngwa 50 nke enwere ike itinye ya na akpaghị aka na Linux distro, ebumnobi nke Fsociety Hacking Tools Pack bụ ịnye akụrụngwa maka mbido na hacking yana otu ngwaọrụ dị nso na nchekwa kọmputa. Enwere ike ịchọta nkọwa nke ngwaọrụ ọ bụla na-eme mkpọ a Ebe a.
Olee otú iji wụnye Fsociety Hacking Tools Pack?
Ntinye nke ngwungwu hacking a dị mfe (anyị nwedịrị ike iji ngwaọrụ ndị ahụ na-enweghị wụnye naanị site na iji ngwa python nke ụlọ ahụ), usoro iji wụnye ma ọ bụ melite ngwa na distro anyị dị ka ndị a:
Mepee ọnụ ma mee iwu ndị a:
Nke a ga-egbu ndị fsociety Menu si ọnụ, ebe ị nwere ike ma nwalee ngwa na-eme ka ọ ma ọ bụ wụnye ma ọ bụ melite dum mkpọ nke hacking ngwaọrụ. N'ihe banyere nwụnye, anyị na-ahọrọ nhọrọ 0, wee họrọ ma nwee ọfụma nke ngwa.
A na-ahụ ezigbo vidiyo nkọwa banyere ngwa ọrụ a yana ojiji ya n'okpuru:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Fsociety: Otu ezigbo mkpọ ngwá ọrụ hacking
Ndewo, mma, mma, gbaghara m, mana ọ gaghị ekwe ka m wụnye, kaa m akara nke a
jukame @ jukame-Satellite-A305D: ~ $ git mmepụta oyiri https://github.com/Manisso/fsociety.git
E tinyebeghi mmemme "git". Nwere ike iwunye ya site na iji kọmputa ede:
sudo apt wụnye git
bash: cd: fsociety: Faịlụ ma ọ bụ ndekọ adịghị
jukame @ jukame-Satellite-A305D: ~ $ sudo nke dabara wunye git clone https://github.com/Manisso/fsociety.git
[sudo] paswọọdụ maka jukame:
E: Na mmepụta oyiri ngwugwu enweghị ike ịchọta
E: Enweghị ike ịchọta ngwugwu ahụ https://github.com/Manisso
E: Enweghị ike ịhụ ngwungwu ọ bụla site na iji "*" yana "https://github.com/Manisso"
E: Enweghị ngwugwu ọ bụla nwere ike ịchọta regex "https://github.com/Manisso"
Ihe na-akpa ọchị bụ na otu ọnụ ahụ na-agwa gị oge 2 ihe ị ga-ede LOL
Zaghachi iji dicuzew
Enweghị m ike ikwere ya. Kedu ihe dị ka onye dị otú ahụ ga-eme na blog dị ka nke a?
ihe ntinye di nfe na Linux obula, O di nnoo oru maka Linux ... makwa mara ụfọdụ ergo mmepe, ị ga-amata git ...
Ọ dị oke mkpa? xD
E wezụga amara nke Maazị Robot na edemede kiddie vibe ọ nwere, edemede ahụ dị nkọ iji kwuo obere.
Ọ bụghị naanị ọgwụgwọ kama ọ dị oke egwu, koodu nbudata na saịtị dị iche iche gụnyere ụfọdụ pastebin, ọ bụrụ na n'ime nke ọ bụla, ha na-etinye edemede edemede mgbe ị na-eji fsociety rie ya. Na-aga n'ihu:
Onye na-achịkwa pasta a? Kedu ka anyị si mara na igbu fsociety na-esote agaghị enwe koodu nke na-etinye ihe ọjọọ?
Echere m na ọ bụ ihe na-enweghị isi iji ma ọ bụ kpọsaa ebe nchekwa koodu a.
A na-emeghachi ihe mgbokwasị n'ọtụtụ oge ... ọ bụkwa nnukwu ibu dị ka ị na-ekwu.
Ihe oru ngo a abughi ihe kariri oru nke onye ofufe nke usoro, dika fansub, ma ebe i puru ihu na ihe nile bu "facade". Ọ na-enye ndị ochie-hacker ikuku nke usoro, ebi akwụkwọ aha na console na a pụtara ìhè n'ụzọ, wdg Ma n’azụ nke ahụ, ị ​​na-ahụ mperi okwu na koodu ahụ (yana ịgwakọta asụsụ ala nke onye nrụpụta na Bekee), usoro ahaziri nke ọma, ugboro ugboro, njikwa njehie site na ịgagharị ụlọ, wdg.
Ka emechara, ha bụ ụyọkọ ọrụ ndị na-ejedebe ịme os.system (idetuo na mado otu esi etinye X).
Mgbe ahụ ihe anyị nwere ike ịhụ dị ka akụrụngwa nke aka (na-enweghị ntinye nke ochie dịka nmap) bụ nyocha anọ na-enweghị isi nke plugins WordPress.
Mgbe ahụ ị nwere ndenye ego dị ka url + "/ nchịkwa" iji lelee ma ọ bụrụ na saịtị arụnyere Joomla (dị ka a ga - asị na ọ bụ naanị Joomla na / ma ọ bụ enweghị ike ịgbanwe) ma ọ bụ saịtị + '/wp-login.php' iji lelee WordPress. Ha bụ ego nyocha ndị ị nwere ike ime site na anya, mana dabere na njirisi ụfọdụ ọ bụghị dịka azịza a pụrụ ịdabere na ya.
Mana hey, ịkwesighi ịbụ onye aka ike. Ọ ka bụ ngwa ngwa. N'ezie, ọ dịghị atụgharị uche iji proxies ime ndị a akwụkwọ ndenye ego haha.
Nsogbu dị na nke a bụ na ị ga - ahụ ndị dị ka JuKaMe, ndị na - amaghị etu e si etinye git (ma ọ bụ mata ọdịda ahụ), mana ha chọrọ iji hacktool. O doro anya na n'ọnọdụ gị ọ bụ ihe mmụta, mana ọ bụrụ otu a, ọ ga-abụ 1%, 99% fọdụrụ, ha ga-anwa ịlele ihe ha nwere ike mbanye anataghị ikike / fuck na ngwa "anwansi" a.
Dị ka m kwuru na okwu m gara aga, edemede kiddies.
Ndị mbido dijo
Edemede kiddies ma ọ bụ buru ibu, iji okwu ọdịnala na-akọwapụta ihe.
Ekwenyere m na ihe niile m hụrụ na TV. Agbanyeghị.
Emere m akwụkwọ ahụ na github m, ejiri m ya mata iji chọpụta ihe ọ bụ, emere m ya pusi iji lelee koodu docker, .py, isntall, echere m na ọ bụ ihe dị njikere maka edemede kiddies wee bido ịchị ọchị na «Kali kuakers »na ọbụna rịọ maka enyemaka na ntinye nke kali, na-ekpughe enweghị ihe ọmụma ha dị na linux, mana ọ tụgharịrị na ọ bụghị, ọ bụ naanị ederede dị mfe na ụfọdụ ụdị nka iji mee ka ọ dị mma nke na-eme ka nbudata nke mmemme (Ezigbo ngwa-ngwa awụnyere) yana ụfọdụ nke enyo enyo, kwa ụbọchị, m na-eji ihe atụ nmap iji lelee netwọkụ (ana m arụ ọrụ na Linux na gburugburu ebe data) ma agbajikwa ya n'ime ederede na-adịghị mma, ọ naghị ewepụta ozi ọ bụla na ọ na-ada ada, emechara nke ọma edemede ahụ adịghị ebe ahụ, ọrụ ahụ na-aga n'ihu na ihe ọjọọ na edemede a, dị nnọọ mfe ma na-agbaji.
Ekwadoro m ịwụnye akụrụngwa
sudo aptitude search git (lee ma git edepụtara)
sudo ikike wụnye git
Zaghachi Maikel Rivas
Enwere m ọtụtụ ozi njehie mgbe m na-eme njikọ
Faịlụ "/usr/share/doc/fsociety/fsociety.py", akara 529
ma e wezụga (), ozi:
SyntaxError: abughi ezigbo syntax
Zaghachi miguel angel obando lancho
Ndewo ụtụtụ ọma, ikekwe m tụbara gị ahụhụ ahụ n'ihi na ị ga-agba ọsọ dị ka eke.
Enwere m olileanya na ị ga-edozi obi abụọ gị.
lol, nke mbu, okwu mbu bu na obu onye oru obula nke zploid.net na-eji, achoro m ikwenye na abu m onye nov na anaghi anwaputa Linux, n'ihi na o nweghi komputa ozo, nwere ezigbo akuru na enwere m ike itinye aka ụwa a. Bịa, VPN n'efu abụghị ihe niile xd.
Ndewo ụtụtụ ọma amaghị m ma ọ bụrụ na ịmara na ị nwere ike ịwụnye backtrack ma ọ bụ ugbu a Kali Linux na nchekwa USB ọ bụla ma mee ya bootable, bido OS site na BIOS ma nwekwaa ike iji diski diski ike, ma ọ bụrụ na ị na-ekwu na ị nwere naanị kọmputa mbụ na Echere m na ị chọghị imebi ya.
Kali ma ọ bụ Linux distro na-agba ọsọ ọsọ ọsọ na kọmpụta arụmọrụ dị ala yana n'ozuzu kọmputa ọ bụla
Ekele, AnonMr. Daalụ maka okwu gị na onyinye gị. Enweela m Fsociety na nke m nke Distro MX Linux nke dịkwa Live na Installable, ya mere, enwere m ike iji FSoerone ma ọ bụ ngwa ọ bụla sitere na draịva USB ma ọ bụ na-enweghị ntachi obi.
Amaara m na ajụjụ m bụ amaghị, mana enwere ike ịbanye na ngwa a ma ọ bụ na-anwale ya?
Enweghị mmejọ ọ bụla nye onye ọ bụla, mana ndị na-akatọ edemede a, ị nwere ike iwepụta ụdị ọzọ a mere nke ọma? Ọ bụrụ na m nwere ihe ọmụma gị, aga m eme, mana anaghị m aga ebe ahụ.
Ana m akwado ime ihe m na-eme ugbu a, budata nkuzi Linux na nkuzi mbụ. wee mụta python wee chee echiche maka ịnwale wifi n'ụlọ m ... "Hacking" bụ ubi mgbagwoju anya ebe n'ọtụtụ mba enwere iwu siri ike na maka ihe ndị dị ka imebi ihe nzuzo nke PC ọ nwere ike ịdị oke ọnụ. M na-akwadokarị ịmụta ya iji chebe onwe gị.
Bụrụ onye ọkachamara na Hacking na Cybersecurity
gydl: interface eserese maka youtube-dl